Umsizi We-Ukwakheka Lo mklamo uhlola isifaniso se-eyelash. Umqambi ubheka i-eyelashing kuwukuphishekela okulindelwe komuntu. Wakha ukuma kwe-eyelash njengesithonjana sempilo noma isigaba esincane sokusebenza. Lokhu kuma kufanekisela ukuzibophezela okukhumbuzayo ekuseni noma ngaphambi kokulala, ngokubeka ama-eyelashes okwesikhashana ngaphambi noma ngemuva kokufakwa. Ukuma kwamehlo kuyindlela yokwazi ngekhanda ukuthi yini okuthile okuncane okufake isandla ku-adventure yansuku zonke.
Ukufakwa Kwengqikithi Lo mklamo uxhumana nesihloko esibonisiwe ngamamojula. Lesi simiso setimu sakhiwe ngomshini wokuzikhulisa wokuxhuma ama-cubes ayisithupha noma ngaphezulu kwiyunithi enwetshiwe kumikhombandlela emithathu yepharamende. Ukulungiswa kwamafomu mahhala ngama-notches kwenza ukuxhumeka kufane nabantu bomdanso obaphakathi. Ukuhlelwa kwezimbobo ezincane kwakha isakhiwo sendawo yokuhlala yesifundo ngezingxenye ezilandelanayo.
Simplest Happiness Izithombe Zentengiso Lwesihlanu 22 Okthoba
Chirming Iphosta Lwesine 21 Okthoba
Santander World Imidwebo Yasemadolobheni Lwesithathu 20 Okthoba
Ukuma Kokubonisana Kwe-Desktop Okuyihlobo Imaski Umsizi We-Ukwakheka Ukufakwa Kwengqikithi Ukukhanya Kwetafula Ukukhanya